गृहपृष्ठ » अर्थ » हेर्नुहोस् बैकले कसरी लुट्छ : लुटेरा बैक चिन्नुहोस् नत्र तपाईको सम्पत्ति सर्वस्व बनाउनेछ !
काठमाडौँ । बैकहरुबाट जोगिएन भने कति बेला सर्वस्व बनाउने हुन् कुनै ठेगान छैन । महालक्ष्मी बिकास बैंकले अहिले यसै गरेको छ ।
राम्रो नियत लिएर उद्यम गर्छु भन्दै ऋण लिन पुग्यो भने नागरिकलाई बैकले रित्तो हात पठाउँछ । तर ठगि गरेर कुम्ल्याउन भने दिनरात लागिरहेको छ । यो बैकले यसै गरेको छ । ठग्नपनि यसरी ठगियो की सुन्दा सबैको निन्द्रा हराउँछ ।
धर्मभक्त राई र भीम बहादुर विश्वकर्मा देवानन्द राईको सुन पसलमा काम गर्ने कामदार मात्र हुन् । उनीहरुले अहिलेसम्म महालक्ष्मी बिकास बैंक नै देखेका छैनन् । बैकमा उनीहरु आफै गएर खाता खोलेकै छैनन् ।
तर उनीहरुलाई एकाएक करोडौं रुपैयाँ ऋण तिर्न आउनु भनी सूचना पठाइयो । सूचना मात्र पठाइएन बारम्बार ताकेता गर्न थालियो । यो खबरले उनीहरु छानाबाट खसे जस्तै भयो ।
उनीहरुका नाममा महालक्ष्मी बिकास बैंकमा लाखौँको ऋण रहेछ । महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड नै नदेखेका उनीहरुका नाममा करोडौंको ऋण कसरी भयो त ?
यो काम बैक कर्मचारी नमिलि हुनै सक्दैन । जबकी राम्रो काम गर्न ऋण माग्न जाँदा अनेकौँ धितो र कागजी झमेला दिएर बैकले झुल्याउँछ । भनेपछि यहाँ लुटेराहरु बैकसँग साँठगाँठ गरे भने बैक जे गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
बैंकबाट हुँदै नभएको सुन तमसुखमा चढाएर पूर्ण राइ र देवानन्द राइले २०७४ साल यता महालक्ष्मी बिकास बैंकको कुमारीपाटी शाखाबाट झन्डै ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका रहेछन् ।
राइद्वयले आफ्नो नाममा मात्र होइन, आफुकहाँ काम गर्ने कुल ११ जना कर्मचारीहरुको नाममा पनि पटक–पटक गरी ऋण लिए । र तिनै कर्मचारीहरु मध्येका दुई उनीहरु रहेछन् ।
यसो त यो गल्ती त महालक्ष्मी बिकास बैंक हो नी । ठगसँग मिलेर बचतकर्ता र शेयर धनीको रकममा रजाई गरिएको हो । यो बैंकहरुलाई माफियाहरुले ठुलो रकम कुम्ल्याउने र सोझालाई फसाउने अखडा भन्दा केही फरक पर्दैन ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यो बैंकले गर्ने अनेक काण्डमा आँखा चिम्लिंदा समस्या आएको जानकारहरुको तर्क छ । यो त्यही बैक हो जसमा ग्राहकले राखेको करिब २५ तोला सुन केहि समय अगाडी हराएको थियो ।
सो प्रकरण मिडियामा छताछुल्ल भएपछी बैंकले ब्राण्डीङ शीर्षकमा खर्च बुक गरेर पीडीतको सुनवापतको रकम फिर्ता गरेको थियो । यो बैंकका अध्यक्षसमेत सेयर विवादमा बसेका छन् ।
राखेको सक्कली सुन कुम्ल्याएर ग्राहकलाई नक्कली सुन थमाएको धेरै भएको छैन । यसैले यहाँ शेयर किन्ने, बचत गर्ने र लकरमा धन सुरक्षण गर्ने बेलैमा होस । पुर्याउनुहोस् । नत्र यो लुटेरा बैकले तपाईलाईपनि लुट्न बेर लगाउँदैन ।